I-velvet cushion igobolondo "iparele emnyama ye-beige" - Moi Mili
Ikhaya > Umqamelo weshelf > I-velvet cushion iqokobhe "ngeeperile emnyama beige"
I-Velvet Moi Mili imilo eqingqwe ngeqokobhe sisiphakamiso sethu sokuhombisa ikhaya lakho. Ziyisixhobo sentsusa kwigumbi lokuhlala, elihombisa ibhedi okanye isitulo setrato. Umqamelo wenziwe ngokuqinileyo kwaye wathungelwe kwilaphu eliphakamileyo le-velvet kwi-beige ekhanyayo. Indwangu ecwebezelayo iya kwazisa imeko entle kuyo nayiphi na into engaphakathi, iya kujongeka intle kwigumbi lokuhlala eliqaqambileyo, apho kulawula imibala yomhlaba. Uyakwenza indalo yefani-yendalo kwigumbi lomntwana wakho. Sikukhuthaza ukuba wenze iiseti zemiqamelo eliqela, ikhangeleka ngathi inomlingo.